Lakana nivadika : Olona 7 maty, 2 karohina -
AccueilSongandinaLakana nivadika : Olona 7 maty, 2 karohina
Lakana nivadika : Olona 7 maty, 2 karohina
13/08/2018 admintriatra Songandina 0
Renim-pianakaviana miisa telo sy ankizy efatra no namoy ny ainy vokatry ny fivadihana lakana nitondra mpandeha manodidina ny 20, tany Mahajanga. Ny tolakandron’ny sabotsy lasa teo no nitranga ny loza, teny an-dranomasina hihazo an’i Katsepy. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny kaomandan’ny vondron-tobim-paritra any Boeny dia tany amin’ny 3 ora sy sasany no nivadika io lakana io.
Tsy hita popoka vokatr’izany ny mpandeha miisa telo, izay nahitana ankizy miisa roa sy lehilahy iray. Nisy ny fampiasana vedety maromaro nandritry ny fikarohana nataon’ny manam-pahefana sy ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF). Ankoatra ireo namoy ny ainy sy mbola karohina dia fantatra fa ny 11 tamin’ireo mpandeha no avotra soa aman-tsara, ary efa nahazo fitsaboana tany amin’ny hopitaly Androva. Raha ny nambaran’ity kaomanda ity ihany dia tsy nahazo alalana handeha avokoa ny fitaovam-pitaterana rehetra tokony hampiasa ny ranomasina tamin’io fotoana io noho ny andro ratsy. Nisy ny fepetra efa napetraky ny APMF, saingy tsy nanaraka ny lamina napetraka ity lakana ity fa mbola nandeha ihany, ka izao niteraka loza namoizana ain’olona izao. “Tsy niainga avy eo amin’ny “Port” toa ny mahazatra ity lakana nitondra mpandeha ity, fa nandeha antsokosoko niala ny fanaraha-maso avy eo anivon’ny APMF, hoy ny fanazavana nentin’ny kaomanda”. Raha ny fanazavana voaray mantsy dia nahery ny rivotra, ary tsy nahatohitra izany intsony ny mpanamory azy ka nahatonga ny loza. Nanamafy hatrany anefa ireo olona any an-toerana fa tsy avy amin’ny habetsak’izy ireo no nahatonga ny loza. Tsy niandry ela fa nandray ny andraikiny avy hatrany moa ireo manam-pahefana vantany vao nahazo fampandrenesana mahakasika ity tranga ity. Teo amin’ny toerana niharan-doza no nanombohana ny fikarohana ireo razana, ka ireo vata-mangatsiaka miisa enina no tafakatra an-tanety nandritry ny alina. Nisy tamin’ireo mpandeha no mbola nokarohina tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza, saingy mbola tsy nahitam-bokany.
Nitohy tao an-toerana omaly maraina, ary tsy namelan’ireo mpitandro filaminana sy ireo tompon’andraikitra avy eo anivon’ny APMF raha tsy nahitam-bokany ny fitadiavana ny razan’izy telo tsy hita popoka, ka ny tolakandro tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany indray no nahitana ny vatana mangatsiakan’ankizivavikely iray. Mbola mitohy hatramin’ny fotoana nanoratanay omaly hariva kosa ny fikarohana ireo razana roa tsy hita nentin’ity lakana niharan-doza ity. Matetika dia hisehoana lozam-pifamoivoizana andranomamy sy andranomasina hahafatesana olona foana ao amin’ity distrikan’i Mahajanga ity, ary matetika dia tsy fahatomombanana eo amin’ny sambo na lakana no mahatonga izany.